> Resource> Video> Olee otú iji tọghata Torrent ka MP3
Ugbu a ọzọ na ndị ọzọ media faịlụ dị maka nbudata site na iyi na magburu onwe ya mma na oru oma ọsọ. Ị nwere ike eleghị anya jide a ọnụ ọgụgụ nke iyi faịlụ, n'ihi na videos, ha na-emekarị na MP4, MKV, AVI, WMV, MOV, wdg; maka audios, ha nwere ike hụrụ na AAC, M4A, WMA, OGG, MP3, wdg Ọ bụrụ na ị ga-amasị nweta nnukwu dialog ma ọ bụ n'okirikiri si videos, ma ọ bụ jide n'aka na ugbu a ọdịyo faịlụ arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ gị niile, nwere ike ị chọrọ iji tọghata ha ka ha MP3: a format fọrọ nke nta na-akwado site na ọ bụla music ọkpụkpọ na music saịtị.
Iji tọghata iyi ka MP3, gị mkpa a siri ike ma kensinammuo iyi ka MP3 Ntụgharị dị ka Wondershare Video Ntụgharị, nke na-enye àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa akakabarede ọsọ na-echebe kpọmkwem audio mma. A bụ otú ime ya.
Free download ikpe version nke iyi na-MP3 Ntụgharị:
Rịba ama: isiokwu a tumadi ụtụtụ na iyi na-MP3 Windows akakabarede. Ọ bụrụ na ị na-eme ime otú Mac, sịnụ, tọghata iyi faịlụ ka MP3 format na Mac-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, odum wdg, i nwere ike ịgụ a nkuzi: User Guide nke Video Ntụgharị maka Mac.
Nzọụkwụ 1: Import iyi faịlụ-iyi ka MP3 Ntụgharị
Pịa "Tinye Files" akara Ibu Ibu iyi videos ị chọrọ iji tọghata. Ma ọ bụ nanị ịdọrọ ha ozugbo ka usoro ihe omume window. Usoro ihe omume na-akwado ihe ọ ọsọ ọsọ video / audio formats; ị nwere ike Ibu Ibu multiple faịlụ site na-ejide ala "Ctrl" button mgbe ahọpụta faịlụ. Bụrụ na ọ bụghị nri, dị nnọọ kụrụ bọtịnụ "Hichapụ".
Nzọụkwụ 2: Họrọ MP3 dị ka mmepụta format
Clickthe format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, na-ahọrọ "MP3" site na "Format"> "Audio".
Ọ bụrụ na ị ga-amasị kọwaa mmepụta ndekọ, pịa atọ ntụpọ n'akụkụ mmepụta nchekwa nhọrọ na mgbe ezipụta mmepụta nchekwa. I nwekwara ike na-ahapụ ya ka defaulted, wee pịa "Open nchekwa" ngwa ngwa ịchọta ndị converted faịlụ.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a chọrọ akụkụ nke music si dum video clip, ma ọ bụ kewaa mbụ faịlụ n'ime ọtụtụ akụkụ, ma ọ bụ jikota ha n'ime a zuru ezu clip, ị pụrụ iji ya agbakwunyere edezi atụmatụ. (N'ihi na "ewepụtụ", "jikota niile videos n'ime otu faịlụ", họrọ video clip na nri pịa ya ịhọrọ nhọrọ; maka gbawara n'etiti, pịa "Ntọala" nhọrọ iji nweta mwube window, mgbe ahụ, lelee gbawara n'etiti igbe ma họrọ site oge ma ọ bụ size.)
Nzọụkwụ 3: Malite iyi ka MP3 akakabarede
Pịa "tọghata" mgbe niile na-setịpụrụ, mgbe ahụ, iyi ka MP3 Ntụgharị ga dechara conversions na-akpaghị aka n'ihi na ị. Nke a video Ntụgharị bụ nnọọ oru oma na nchigharị, na ọganihu mmanya ga-egosi gị na pasent na fọdụrụ oge.
Site n'enyemaka nke ndị ọkachamara Wondershare Video Ntụgharị, ị nwere ike mfe tọghata videos ka videos, audios ka audios, wepụ audios si videos. N'ụzọ dị otú a, na-egwu iyi faịlụ n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla bụ agaghịkwa a siri ike nke. Gbalịa ugbu a!
Olee otú iji tọghata Ustream ka MP3 na a Click
Olee otú Download New York Times Video na One Click